युगसम्बाद साप्ताहिक - सामथ्र्यविनाको अधिकार पोखिन सक्छ
सामथ्र्यविनाको अधिकार पोखिन सक्छ
Tuesday, 04.18.2017, 11:24am (GMT+5.5)
भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्योभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ त्यसै भनिएको हैन होला । हाल स्थानीय तहलाई दिने भनिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने आधारभूत भौतिक आवश्यकता, वातावरण र कार्यान्व्यन गर्ने संयन्त्रको क्षमतातर्फ ध्यानै नदिई हचुवाका भरमा आदेश दिएर मात्रै हुन्छ ? दिएको चीज राखेर सदुपयोग गर्ने र अटाउने भाँडो पनि चाहियो, भुइँमा पोख्ने वस्तु त होइन नि अधिकार । अरु नभए पनि सर्वप्रथम प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी हुनैप¥यो, नत्र त्यहाँ रहने कार्यालयहरू नै असुरक्षित हुन्छन् । हुन त सुरक्षा कहाँ पो छ र ? तैपनि सरकारी कार्यालय रहने ठाउँमा केही त हुनुप¥यो नि । अहिलेको स्थिति शून्य अवस्थामा छ । न कुनै कार्यालय छ, न जग्गा छ । साठी–सत्तरी कर्मचारी रहने भनिएको छ, कहाँ बसेर काम गर्ने हुन् थाहा छैन । सरकारले हावामा तर्बार चलाइएको छ ।
कसैलाई पनि भारी त्यत्ति मात्र बोकाउनुपर्छ जति उसले बोक्न सक्छ । अहिले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएका काम (कार्यतालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका कामहरू)को भार थाम्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहमा अहिले छँदैछैन । एकातिर सुम्पिएको जिम्मेवारी समाल्ने र अर्कातिर बढ्दो (करभार) बोहोर्ने सामथ्र्य नै छैन भने वास्तविकता एकातिर र देखाउने काम अर्कातिर अर्थात् ढाँटछन् मात्र भैरहेको छ । एउटा सानो उदाहरण– निःशुल्क भनिएको शिक्षामा गाउँगाउँका स्कूलहरूमा समेत चर्को शुल्क असुलिएको छ । पहिले विद्यालय निरीक्षण गरिन्थ्यो, अब गरिंदैन । मूल्यांकन चाहिं कुन पार्टीको हो ? भन्ने हिसावबाट गरिन्छ । संचालक समितिको अध्यक्ष हुन पनि ठूलठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् भने अब त गाउँपालिका प्रमसख–उपप्रमुखको रेट त खपिनसक्नु हुने स्थिति देखा पर्दैछ । टाठाबाठा–हुनेखाने–खानदानी फटाहा जुर्मुराउन थालिसकेका छन् ।
आजसम्म यहाँ जतिथरि सत्तामा आए, ती सबैले नीति नियम होइन, आफ्नै लहडबाजी चलाएका छन् र आफ्नै दुनो सोझ्याएर गएका छन् । ती सबैको दुष्परिणाम जनताले वेहोर्न परिरहेको छ । ७५ हजार म्यादी प्रहरीको माग हुँदा १ लाख ७२ हजार आवेदन पर्नुबाटै देश कुन भयावह बेरोजगारीको स्थितिमा रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाशक्ति कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । यहाँ भने एकथरि प्रतिदिन संसद वहिस्कार ग¥यौं भन्दै भत्ता खाँदै गर्न लाज मान्दैनन् । अर्काथरि फेरि उपप्रधानमन्त्री जस्ताले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा भाग नलिने, तर सुविधा (मन्त्री पद) नछोड्ने गरेर लाजमर्दो काम गरिरहेको देखिएकै छ । मन्त्री हुँदैमा सर्वज्ञ हुने पनि होइन, तैपनि त्यस्ताले पाइलैपिच्छे अनर्थ गर्दैआएको अबस्थामा त्यस्तो रोग अबब गाउँतहमा समेत सल्किदैछ । सबै काम हतार र हचपचमा छ । स्थायित्व कुनै पनि पक्षमा देखिंदैन । संघीयता लागू ग¥यौं भनेर नेताले घोक्रो फुलाउनु बाहेक जनताले सुखको सास फेर्ने दिन आएनन् ।
अहिले चुनावको श्याल हुइँया चलेको छ । सबै पार्टीले जित्नेलाई उठाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, असल र इमानदारको नाम कसैले लिंदैनन् । कसले जित्छ ? जोसंग पैसा छ, जो खानदानी सामन्त छ, जो फटाहा छ, जोसंग गुण्डा छन्, जसले धम्क्याउन सक्छ– त्यस्तैले जित्ने गरेको देखिएकै छ । आजको स्थितिमा अपवाद बाहेक (त्यो पनि कताकति मात्र) चुनाव जित्ने नै त्यस्तै भ्रष्टहरूले हो । अब उनै फटाहाका उदय हुन थालेको छ । राष्ट्रहितको सोच नै कतै देखिंदैन । स्थानीय तहलाई दिने भनिएका यति धेरै अधिकार छन्, जसको सदुपयोगको सम्भावना ज्यादै न्यून छ । प्रमुख–उपप्रमुख पद यति महत्वपूर्ण छन् जसका लागि धूर्तहरू अहिले नै जुका जस्तै लपलपाइरहेका छन् । सरकार चलाउनु भाषण जस्तो सजिलो त हुँदैन नि, क्षमता पनि चाहिन्छ ।
स्थानीय निकायलाई तहमा बदलेपछि सबै कायापलट हुन्छ । उद्योग खुल्छन्, जनताले काम पाउँछन्, विद्यालयहरू राम्रो चल्छन् इत्यादि भनेको सुनिन्छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचित हुने मान्छेमा परिवर्तन नआएसम्म केही पनि हुँदैन, बजेट मात्रै दुरुपयोगमा जान्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । अब चुनिने मानिस पनि उनैउनै पार्टीका उनैउनै हुन्, कुनै देवलोकबाट दूधले नुहाएका आउने त होइनन् । त्यसैले सुधार ल्याउने तत्व भनेकै मान्छेमा हुने सुधार हो, त्यो भएकै छैन, यथावत छँदैछ । प्रजातन्त्रमा पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, त्यो स्वाभाविक हो । तर, जुनसुकै पार्टीकाले जिते पनि चुनाव जितिसकेपछि त्यो मान्छे निरपेक्ष, तटस्थ र सबैको साझा व्यक्ति हुन नसक्नुपर्छ । अनि मात्र सुधार सम्भव छ । तर, आजका मान्छेको संकुचित व्यवहार हेर्दा त्यो चरित्र सुधारको सम्भावना अझै धेरै टाढैछ जस्तो लाग्छ ।
राजनीति गर्नेहरूको एकमात्र उद्देश्य मन्त्री हुनु र जुनसुकै बाटोबाट भए पनि कुस्त कमाउनु मात्रै भएकाले सबै काम बिग्रेको छ । समय र आवश्यकता हेरेर जनचाहना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नै बिर्सेर या स्वार्थवश नेताहरूले बाटो बिराएको दुष्परिणाम आज भोग्न परिरहेको छ । अहिले मौसम अनुकूल हुनाले कृषि उत्पादन बढेको भनिएको छ । तर, त्यसमा सरकारको त कुनै योगदान छैन । स्वभावतः या प्रकृतितः हुने र भएका कामलाई सरकारले गरेको भन्न सुहाउँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या आज भ्रष्टाचारको छ । नेता, मन्त्रीले नै ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाएको इतिहास छ । माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार, लाउडा–धमिजा–सुडान काण्डमा प्रधानमन्त्रीहरू नै चर्चामा आए । जनताले अख्तियारको आश गरेका थिए । अख्तियारलाई पनि सरकारले ‘खोपा’मा थन्क्याइदियो । सुशासन त अब कल्पनामै सीमित रह्यो ।
अर्को चर्को समस्या धनी र गरीब बीचको बढ्दो खाडल छ । सरदरको हिसाव गरेर विनोद चौधरी र सुकुम्बासी–गोठालाई एउटै तुलामा जोखेर प्रतिव्यक्ति आय देखाउनु बेइमानी हो, अन्याय हो । मापदण्ड त वास्तविक हुनुपर्छ । समतामूलक समाज बनाउँछौं भन्नेहरूले सोच्नुपर्ने हो । उद्योग र उत्पादन पनि चाहिन्छ कि भाषणकै भरमा हुन्छ ? बुझिनसक्नु भएको छ । अधिकार दिंदैमा नतिजा पनि राम्रो आउँछ भन्न सकिंदैन । केन्द्र र जिल्लाले गर्ने कामको जिम्मा स्थानीय तहमा दिंदा क्षमता बाहिर भएर पोखिने सम्भावना छ भने अधिकारले भ्रष्टाचारलाई पनि साथै ल्याएको हुन्छ भन्ने पनि बिर्सन हुँदैन । अब गाउँघरका पुराना सामन्त, फटाहाका दिन राजनीतिक आडमा अरु चम्किने हुन् कि भनेर नि जनता सशंकित छन् ।